I-R & D ye-Apple ime ekuphuhliseni i-micro-LED eya kudlula ezandleni ze-TSMC | IPhone iindaba
Ndimisa i-R & D ye-Apple kuphuhliso lwe-micro-LED eya kudlula kwi-TSMC
Sithethile ixesha elide malunga nophando luka-Apple ngezikrini ze-micro-LED zezixhobo zayo ezilandelayo kwaye kukuba ezo zeCupertino bezisokola nazo ixesha elide ukuphunyezwa kwazo. Inyaniso kukuba iApple Watch ibhalwe njengesixhobo sokuqala sokufumana obu buchwephesha butsha Ukuhanjiswa kwezikrini ze-OLED zangoku, kodwa kule nto inde indlela kwaye kukuba kukho intetho yexesha elide eza kufika nge-2019 okanye ngo-2020.
Ngayiphi na imeko, idatha efanelekileyo yanamhlanje yingxelo ebonisa intsebenziswano entsha phakathi kweApple kunye neTSMC yokuphuhliswa kwezi zikrini zincinci ze-LED, into ebonakalayo enefuthe kwizicwangciso zenkampani kwaye ishiya iqela lophando kunye nophuhliso ngabasebenzi abambalwa, nangona lo msebenzi uqhubeka ngaphandle kwekhefu ukuzisa obu buchwephesha ngokukhawuleza kwizixhobo zakho.
Kucacile ukuba amaDijithi anelungelo elikhethekileyo kule micimbi kwaye ke olu lwazi kufuneka lukholelwe. I-TSMC ngumenzi wangoku weetshipsi ze-iPhone kwaye unokuba nomdla kakhulu kuphuhliso lweepaneli eziza kubonelela ngeApple Watch, i-iPhone kunye ne-iPad kwixa elizayo, kodwa oku kuyimfuneko ukulandela indlela yophando. Kodwa eyona nto imbi kule ndlela ingaphaya kokuba itekhnoloji yeepaneli iyaphuhliswa namhlanje, ngqo ukuveliswa kwezi zikrini kunye nezinto eziluhlaza eziyimfuneko ukubonelela ngeemfuno ezinkulu ezifunwa yiApple.
Okwangoku iApple kunye neTSMC banobudlelwane obuthembekileyo, obuzinzileyo nobubalulekileyo xa kuziwa kwimveliso yecandelo. Ukuba le ngxelo iqinisekisiwe, iyakubonisa ngokucacileyo ukuba bazakuqhubeka besebenzisana ngesandla ixesha elide, kuba ukuphuhliswa nokuphunyezwa kwezi zikrini akunakuthiwa kusuka namhlanje ukuya ngomso. Iindaba kunye namahemuhemu malunga nolu hlobo lwezikrini esele sizibona ixesha elide njengezikrini ezizayo ze-iPhone, ukuya ekubeni netekhnoloji engaphezulu kokungqinisisiweyo kwaye nathi ibonisa ukuba iziboniso ze-OLED zilinyathelo nje elifunekayo nelidlulayo kwii-iPhones nakwi-Apple Watch.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Ndimisa i-R & D ye-Apple kuphuhliso lwe-micro-LED eya kudlula kwi-TSMC
Mva kwemini, njengomlandeli othembekileyo wale webhusayithi ndiyithandayo, kuya kufuneka ndibhence ukuba iwebhusayithi engenayo ethwele inguqulelo yeselfowuni iyaphuma emgceni, ibangela ukuba iwebhusayithi isilele kwaye iyakhathaza.
Nceda uthambise imithombo yeendaba.
Mva kwemini Clasa, siyithathela ingqalelo kwaye siyabulela ngokusilandela!
Susa indawo yeefoto zakho ngeNoLocation, yasimahla okwexeshana
UGoogle uthenga umhlaba ukwakha iziko ledatha eDenmark, njengoko kusenziwa nguApple